Nahatratra Macs | ny malware malware XLoader Avy amin'ny mac aho
Ny malware XLoader dia nahatratra ny Macs
Nisy malware vaovao nitsambikina avy tao amin'ny Windows ka hatramin'ny macOS. Antsoina hoe XLoader ary afaka mividy azy mora foana amin'ny Deep Web ianao amin'ny vidiny 49 Euros (~ $ XNUMX), hahafahana manafika izay tianao, tsy maninona na manana Windows PC ianao, na Mac misy macOS. Lamba inona izany.
Ary rehefa tafiditra ao anaty masinin'ilay niharam-boina ny "bibikely", dia afaka mandray an-tsoratra ny bokotra, fakana sary, ary miditra amin'ny angona tsy miankina hafa. Averiko ihany: lamba inona.
Ny malware XLoader fanta-daza izao dia nifindra avy tao amin'ny Windows PC mba hanafika ny Macs izay miasa macOS ihany koa. Fivoaran'ny malware fantatra amin'ny hoe boky endrika, mamela ny mpanafika hanoratra ny bokotra fanalahidy, handray pikantsary ary hiditra amin'ny fampahalalana tsy miankina hafa amin'ny solosaina miaraka amina rindrambaiko Microsoft na Apple tsy mazava.
Ny malware toy izany dia mora hita ao amin'ny tranonkala maizina amin'ny alàlan'ny 49 Euros. Vantany vao novidiana dia azonao atao ny manafika solosaina rehetra na misy Windows na macOS napetraka aza.
Ny vaovao tsara dia mitaky hetsika ataon'ny mpampiasa hampavitrika azy. Ilainao tantano izy amin'ny masinin'ilay niharan-doza. Matetika ny mpanafika dia mandefa mailaka izay misy ny malware tafiditra ao anaty antontan-taratasy Microsoft Office. Raha vantany vao misokatra ny antontan-taratasy dia mihetsika izy.
Mety hampidi-doza ny mpampiasa Mac rehetra izany. Tamin'ny taona 2018, Apple dia nanombana mihoatra ny 100 an-tapitrisa Mac dia manana karazana malware.
Hamarino ny fikarohana nanara-maso ny hetsika Xloader teo anelanelan'ny 1 Desambra 2020 sy 1 Jona 2021. Nahita ny fangatahana XLoader ny RCP hatramin'ny firenena 69. Maherin'ny antsasaky ny (53%) amin'ireo niharam-boina no monina any Etazonia.
XLoader miafina izany, izay midika fa sarotra ny milaza hoe voan'ny Mac ny azy, saingy manome fomba fanamarinana i Apple.
Mandehana any amin'ny lahatahiry / Users / [solonanarana] / Library / LaunchAgents lahatahiry
Zahao ireo anaran'ny fisie mampiahiahy ao amin'ity lahatahiry ity (ohatra etsy ambany dia anarana an-tsokosoko) /Users/user/Library/LaunchAgents/com.wznlVRt83Jsd.HPyT0b4Hwxh.plist
Toy ny misy malware, azonao atao ny mampihena ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fisorohana ny tranokala tsy feno ary mitandrina amin'ny fametahana. Aza manokatra firaketana velively raha tsy fantatrao ny mpandefa ary miandry azy ianao, satria mahazatra ny mpanafika ny manisy adiresy mailaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny malware XLoader dia nahatratra ny Macs
Fomba fampiasana ny jiro jiro Apple Watch
Ity no mailaka nalefan'i Apple ho an'ireo izay nahavita ny taona maimaim-poana amin'ny Apple TV +